डाउनलोड गर्नुहोस् Snake io APK को लागी Android
डाउनलोड गर्नुहोस् Snake io
डाउनलोड गर्नुहोस् Snake io,
Snake io APK सँग एक सरल तर्क छ जुन एक पटक खेले पछि छोटो समयमा लतमा परिणत हुन सक्छ; तर पनि एक रमाइलो मोबाइल कौशल खेल।
Snake io APK डाउनलोड गर्नुहोस्
Snake.io मा, तपाईंले एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेर आफ्नो स्मार्टफोन र ट्याब्लेटमा नि:शुल्क डाउनलोड गर्न र खेल्न सक्नुहुन्छ, केही समयअघि रिलिज भएको र ठूलो प्रशंसा जितेको खेल Agar.io मा रहेको सूत्रलाई यससँग जोडिएको छ। क्लासिक साँप खेल को संरचना।
खेलमा हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको हाम्रो सानो सर्पले थोप्लाहरू खाने र यसलाई सबैभन्दा ठूलो सर्प बनाउनु हो। यो काम गर्दा, हामी सीमित क्षेत्रमा अन्य खेलाडीहरू द्वारा नियन्त्रित सर्पहरूसँग संघर्ष गर्छौं।
Snake.io मा, हामीले थोप्लाहरू खाँदा हाम्रो सर्प लामो हुन्छ। अन्य खेलाडीका सर्पहरू लामो हुँदै जाँदा ठाउँ सानो हुँदै जान्छ। यदि तपाईंले नियन्त्रण गर्ने सर्पसँग अर्को सर्पले टोक्नुभयो भने, खेल समाप्त हुन्छ। त्यसैले पोइन्ट खाँदा सावधानी अपनाउनुपर्छ। अर्को सर्पलाई टोक्ने सर्पहरू टुक्राटुक्रा हुन्छन्, यी टुक्राहरू खाएर तपाईं छिटो बढ्न सक्नुहुन्छ। Snake.io मा, तपाईंसँग सानो सर्प भए पनि सफल हुने मौका छ।
Snake.io मा, मास छोडेर तपाइँका विरोधीहरूलाई अस्थायी रूपमा गति बढाउन र धोका दिन पनि सम्भव छ।
Snake io APK एन्ड्रोइड खेल सुविधाहरू
क्लासिक सर्प खेलहरू।
नि: शुल्क मल्टिप्लेयर खेलहरू।
नि: शुल्क लत खेल।
सँगै प्रत्यक्ष घटनाहरू।
इन्टरनेट बिना खेल्नुहोस्।
खानेकुराले भरिएको खेतमा सर्प हुर्काउन खानुहोस्। स्नेक गेमको रमाइलो io संस्करण खेल्नुहोस् वा फोनहरूमा खेल्ने क्लासिक स्नेक गेममा उच्च स्कोरका लागि आफ्नो रिफ्लेक्सहरू देखाउनुहोस्।
अन्य खेलाडीहरूलाई देखाउनुहोस् कि तपाईं सर्प खेलमा कति राम्रो हुनुहुन्छ। आफ्नो साथमा साथी लिनुहोस् र डबल गेम मोडमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। सर्प खेल मा राम्रो छैन? YouTube मा स्नेक गेमहरू हेरेर आफैलाई तालिम दिनुहोस्।
तपाईंले जुनसुकै यन्त्रमा खेल्नुभए पनि, तपाईं धाराप्रवाह खेल्नुहुनेछ। स्नेक गेम नि:शुल्क छ, मोबाइल जोइस्टिक नियन्त्रणहरूसँग सहज गेमप्ले प्रदान गर्दै। के तपाईं अन्य सर्पहरू र मालिक सर्पहरू विरुद्ध लड्न चाहनुहुन्न? नयाँ रमाईलो घटनाहरू प्रत्येक महिना फरक दृश्यमा थपिन्छन्।
Snake io खेल इन्टरनेट जडान आवश्यक छैन। के विज्ञापनहरूले तपाइँको गेमिङ अनुभवमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ? इन्टरनेट बन्द गर्नुहोस् र रमाइलोसँग खेल्नुहोस्। क्लासिक आर्केड खेलहरूले यस नयाँ लत सर्प खेलमा अनलाइन लिडरबोर्ड चुनौतीहरू पूरा गर्छन्। लाखौं खेलाडीहरूसँग सामेल हुनुहोस्। देखाउनुहोस् कि तपाईं सबैभन्दा लामो बाँच्ने सर्प खेलाडी हुनुहुन्छ।
Snake io ले कुनै पनि मोबाइल उपकरणमा आरामसँग खेल्नको लागि डिजाइन गरिएका नियन्त्रणहरूसहित सहज, छिटो गेमप्ले प्रदान गर्दछ। तपाईं स्नेक io APK डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जसले लाइभ घटनाहरू र अनलाइन मोडहरू वा Google Play बाट तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा नि:शुल्क रूपमा स्नेक गेममा थप उत्साह थप्छ।
Snake io चश्मा
विकासकर्ता: Amelos Interactive